Enwere ike ịzụta Nokia 7 Plus ugbu a na Spain | Androidsis
Nokia 7 Plus dị ugbu a na Spain
Nokia bụ otu n'ime ụdị ama ama na MWC 2018 gara aga nke ha gosipụtara ekwentị dị iche iche. Otu n'ime ụdị ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara bụ Nokia 7 Plus. Ngwaọrụ ahapụla gị nke ọma. N'ikpeazụ, mmalite nke ihe nlereanya ahụ abịala. N'ihi na ebidola ngwaọrụ mbinye aka a na Spain.
Ọ bụ ekwentị nke abụọ ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara na mmemme ekwentị a ga -ebido n'ihu ọha na mba anyị. Kemgbe Nokia 7 Plus na -eso Nokia 6, nke ewepụtara izu ole na ole gara aga. Kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ngwaọrụ ahụ?
Site na mwepụta a, anyị amatalarị ụfọdụ ọnụahịa anyị nwere ike ịtụ anya na ngwaọrụ a. Ma, Nke mbụ, anyị na -ahapụrụ gị nkọwapụta nke Nokia 7 Plus a. Ka anyị nye gị echiche maka ihe ekwentị chere anyị.
Ihuenyo: 6 inch nwere mkpebi FullH na nha 18: 9
Nhazi: Snapdragon 660 na ọsọ 2,2GHz
Nchekwa ime: 64GB
Batrị: 3.500 mAh na ngwa ngwa
Rear igwefoto: 12 + 12 MP nwere 2X Optical Zoom na Ọnọdụ Ọkachamara
Usoro njikwa: Gam akporo 8.0 Oreo
ndị ọzọ: Onye na -agụ mkpịsị aka azụ, ụdị USB C, ọdịyo OZO
Ekwentị na -akụ nzọ dị oke mma, na ihuenyo nha 18: 9. Na mgbakwunye, n'azụ anyị na -ahụ igwefoto abụọ. A na -atụ anya na enwere ndozi na igwefoto ma e jiri ya tụnyere ụdị nke afọ gara aga. Mana ugbu a anyị enweghị onyonyo ejiri igwefoto ndị a mee.
Nokia 7 Plus bụ ekwentị na -atọ ụtọ nke ukwuu. Na mgbakwunye, eziokwu nke inwe ezigbo gam akporo na -ekwe nkwa na ọ ga -enwe mmelite ngwa ngwa. Ekwentị dị ugbu a na Spain. Ọnụ ahịa sitere na euro 392 ruo 399 dabere na ụlọ ahịa. Mana nke a bụ ọnụahịa ọnụahịa nke ngwaọrụ Nokia ọhụrụ. Kedu ihe ị chere banyere ekwentị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Nokia 7 Plus dị ugbu a na Spain
Opera VPN na-ekwu ọfọ